दाँतमा प्वाल परेको वा किरा लागेको छ ? अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय – Annapurna Daily
दाँतमा प्वाल परेको वा किरा लागेको छ ? अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय
On Jun 26, 2021 16,071
एजेन्सी । दाँतको साइनो अनुहारको सौन्दर्यसँग मात्र छैन, स्वास्थ्यसँग पनि छ । चिकित्सकहरु भन्छन् नि, ‘राम्ररी चपाएर मात्र खानेकुरा निल्नुपर्छ, नभए अपच हुन्छ ।’ चपाउनका लागि दाँतको भूमिका हुन्छ । तर, दाँत नै सडिएको, भाँचिएको वा किरा परेको छ भने ?
खानेकुरा टुक्राउन र पचाउनमा केही समस्या पक्कै हुन्छ । त्यसैले दाँतको स्वास्थ्यलाई निकै ध्यान दिनुपर्छ । दाँत सडिएको र त्यसमा खाल्डो परेको अवस्थालाई क्याभिटी भनिन्छ । के हो क्याभिटी, किन हुन्छ भनेर जानेको खण्डमा घरेलु विधि अपनाएर पनि यो समस्याबाट मुक्त हुन सकिन्छ ।